Sarkaal Sare oo ka Tirsan Shabaab oo ku biiraya…
Sarkaal katirsanaa Alshabaab oo lagu magacaabo Cabdulfatah Abu bakar Abdi oo loo yaqaano Mousa al Muhajir oo ay wehliyaan 20 kamid ah dagaalyahanadiisa, ayaa wararku sheegayaan inuu ku biirayo ISIS.
Xogtaan oo ay baahiyeen ilo sirdoon ah ayaa sheegaysa in sarkaalkaan uu ahaa taliye caanka ah ururka Alshabaab dhexdiisa, balse lama garanayo sababta xilligaan kusoo beegtay inuu ku biirayo ururka Daacish.
Ku biiritaankiisa Daacish ayaa kusoo aadaysa xilli dhawaan Daacish ay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Alshabaab.
« Qaramada Midoobey iyo Dowladda Soomaaliya oo ka wadahadlay Xoojinta Xariirka 2 dhinac.
Dowladda oo War ka soo saartay Ciidamo la sheegay in ay diidanyihiin Doorasho aan aa isku Raacsaneen. »